प्रकाशशरण महत - विकिपिडिया
नुवाकोट, कविलासका डा. प्रकाशशरण महत संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसका सभासद् भएका थिए। उनी रामशरण महतका भाइ हुन्।
कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा भाग नलिएका डा. महतले ने.वि.संघको महामन्त्री, सात पार्टीको वार्ता कमिटी सदस्य र परराष्ट्र राज्यमन्त्रीको जिम्मेदारी सम्हालिसकेका छन्। उहाँको राजनीतिका यात्रा २०३६ सालमा शुरु भएको हो, जुनवेला उहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। यसक्रममा उहाँ पटक पटक पक्राउ पर्नुभएको छ।
दुई सन्तानका पिता डा. महतले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पी-एच्. डी. गर्नुभएको छ। समाजसेवामा उहाँको विशेष रुचि छ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा उहाँका आर्थिक विश्लेषण र परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी लेख प्रकाशित हुँदै आएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र युवा रोजगारीका मुद्दालाई आफूले संविधानसभामा विशेष जोड दिएर उठाउने वताउनुहुन्छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रकाशशरण_महत&oldid=994541" बाट अनुप्रेषित